Umthandazo kaSanta Muerte wokulawula indoda [+]?
Umthandazo woKufa okungcwele ukuze ulawule indoda Kubonwa ngabantu abaninzi njengomthandazo ongenanto yakwenza nenkolo yama Katolika okanye yama Krestu kuba leyo yinkolelo evela kubantu bomthonyama eMexico.
Nangona kunjalo, kwaye nangona ijongeka njengomfanekiso wedemon, inyani kukuba le ngcwele incede abantu abaninzi kwaye inamandla akhethekileyo kwiimeko apho kubandakanyeka iimvakalelo.
1 Umthandazo kaSanta Muerte wokulawula indoda Ngubani uSanta Muerte?
2 Umthandazo woKufa okungcwele ukuze ulawule indoda
2.1 Uyintoni lo mthandazo?
2.2 Ndingawenza nini umthandazo kuSanta Muerte ukuze ndilawule?
Umthandazo kaSanta Muerte wokulawula indoda Ngubani uSanta Muerte?
ISanta Muerte iboniswa njengenkolelo edumileyo eyaziwayo kwiidolophu zaseLatin American, ubukhulu becala eMexico apho ibhiyozelwa njengehlelo eliqhelekileyo lonqulo.
Ngenisa kunye nomfanekiso wamathambo onokuthi unxibe naluphi na umbala kodwa eyona imele uninzi lwayo imnyama.
Abalandeli bakhe bahlala beziva belahliwe njengoko behlonela isanta elingakhange liyiqonde into yokuba icawa yamaKatolika ayamkeli olo hlobo kodwa intliziyo nokholo lwabaninzi luyiNgcwele njengaye.
Bathi hayi vuselela uloyiko kodwa imbeko kwaye ukuthemba kwaye yeyona nto yokugqibela eyenza abo banda bajoyine amakholwa.
Ukutshisa ubusi, ukutshisa inkanuko. Ndiziva ndivelana nawe .........
Kwaye uziva ngenxa yam iingcinga zakho neemvakalelo zakho ...
Ndikongamela ngokupheleleyo engqondweni kwaye izenzo zakho ziphantsi kwempembelelo yoKufa okuNgcwele.
Ndikubize ____________________ Ndidinga wena __________________ Yiza undikhangele __________________ Kwaye ugobe phambi kwam uyakuba. ________ undibonise lonke uthando lwakho.
_____________ Yiza ezinyaweni zam. Gcwalisa yonke into endiyicelayo kuwe. Inenekazi lobusuku, iNenekazi eliDumileyo kwindalo iphela, kunye namandla alo asemhlabeni ...
Ukuphembelela nokulawula iingqondo, iintshukumo kunye nentliziyo ye-__________________ Inenekazi elineenwele, wena wam oswelekileyo uKusweleka kukaZisa kum u-____.
Ngamana amanyathelo akhe angafika kum, Ngamana intliziyo yakhe ingaphalala uthando kum, Ngamana umzimba wakhe ungandidinga kuphela Ukuba inkanuko yakhe ibe nothando endimnika lona.
Lowo usikelelekileyo, sukubanika umzuzwana wokonwaba okanye uqinisekise ukuba _________ukube ungekho kum ungavumeli naliphi na ibhinqa ukuba lisondele kuwe Kwaye ukuba basondele kuwe, Ukuba uyakubasusa ngokuqinisekileyo uya kubususa ebomini bakho ngenkani.
Ukuba ibingeyam, ayiyi kuba yeyabani na.Kufa okuNgcwele kaNgcwele, Nkosazana enamandla, ndikucela ngokuzinikela kwam konke, Ukuba unikele ____________________ lonwabo ecaleni kwam Incindi yeMyrtle ijikeleza etshisa egazini lakhe ndikubiza ____________________ yiza kum. Intliziyo yakho, iingcinga zakho kunye nomzimba wakho Ukususela ngalo mzuzu zezem kwaye ziya kuba zezam, ngonaphakade.
Egameni loKufa okuSikelelekileyo ndiyakubuza. Inenekazi elihambisayo lindizisela _________________ Idrink yothando kum.
Ndizinikezele kwizityalo zam Ukuthobela kwaye undibonise lonke uthando Uziva njani ngam. U-Santísima Muerte, wena ohambisa awona mandla axineneyo kwaye anzima kakhulu kwindalo iphela, bend ________________. Ndiyakucela ukuba uze nayo kum njengoko injalo nalapho ikhoyo. Nokuba yenye yezona ndawo zimnyama Soloko ubeke u _______________ phambi kwam uvumele indlela yakhe iwele ecaleni kwale yam.
U-Santísima Muerte ongaba liwaka Wena onokuba sisigidi, ndizise ku _____________ Kwaye ngothando lwam ndicela ukuba ihashe lakho lizise phambi kwam Ukuba umkhonto wakho uliphose kum Inenekazi elinamandla qinisekisa ukuba nokuba ayinguye lowo undivumba , oko kundikhumbuza, ukuba ndiziva ndikho ...
Nabani anaye kwaye kwindawo apho akhoyo, Inenekazi lasebusuku, Inenekazi lasemini, ndicela ukuba umoya we _________________ ube nam ngalo lonke ixesha ...
Ukuba uyandithanda kuphela, ukuba unamehlo nje kuphela ngokufa kwam okusikelelekileyo.
Kwintliziyo yam nasemzimbeni wam Umzimba, ingqondo nomphefumlo we _______________ yiza kum Ebusuku nasemini uya kuba nam Nceda, ndikucela ngegama leSantísima Muerte Santísima Muerte undinike amandla, intliziyo…
Kwaye i-domain iyonke ye __________________ Santísima Muerte ndiyakucela ukuba ube ngumkhuseli wam kwaye uzalisekise zonke izinto ezilungileyo endizicelayo kuwe ndikubiza ngokuba yiSantísima Muerte Ungandishiyi ...
Ukufa okuSikelelekileyo Ungandihoyi Ukufa okusikelelekileyoondizise ku _________.
Le iphiko likaSanta Muerte lokulawula indoda enzima inkulu kodwa yomelele.
Ayisiwo umthandazo wokuzingca, ngumthandazo ocela amandla okuba ngumntu ukuze ubone into eza kutshintsha ingqondo yakhe.
Ayisiyonto yokuhlazisa okanye ukwenza abanye benze ukuthanda kwethu, kukubanceda babone ukhetho olunokuthi, ngokokwathi, olona lubalaseleyo.
Oku kunye yonke imithandazo Banamandla ngokwenyani, ungayenza nanini na xa ukwimeko enzima ongasazi ukuba wenzeni.
Kwimeko yalo mthandazo ungqalileyo, into efunekayo kukuba ukwazi ukulawula omnye ngomthandazo kwaye oku kunokwenzeka ukuba unokholo.
Ndingawenza nini umthandazo kuSanta Muerte ukuze ndilawule?
Uninzi lwabantu licebisa ukuba kubhetele ukuba wedwa kwaye ulungiselele imeko-bume ukuze amandla amabi angaphembeleli ukuya emthandazweni kodwa oku akunyanzelekanga.
Umanyano oluceliwe njengemfuneko engabalulekanga kukuba nokholo oluninzi kuba asinakukhulisa umthandazo ukuba asikholelwa ukuba le nto siyicelayo inokufunyanwa ngokungummangaliso.
Fumana uyolo lothando kunye noMthandazo oyiNgcwele wokufa ukuba ulawule indoda.
Umthandazo wokufa oyiNgcwele ngomsebenzi